1 Samueri 17:1-58
17 Zvino vaFiristiya+ vakaunganidza mapoka avo kuti varwe. Pavakaungana paSoko,+ raJudha, vakabva vadzika musasa pakati peSoko neAzeka,+ muEfesi-dhamimu.+ 2 Asi Sauro nevarume vaIsraeri, vakaungana, vakadzika musasa mubani reEraa,+ vakagadzirira kurwa kuti vasangane nevaFiristiya. 3 VaFiristiya vakanga vakamira pagomo kudivi rino, uye vaIsraeri vakanga vakamira pagomo kudivi iro, pakati pavo paine mupata. 4 Imwe mhare yakatanga kubuda mumisasa yevaFiristiya, uye yainzi Goriyati,+ wokuGati,+ akanga akareba makubhiti matanhatu nepanoyerwa neminwe ikatambanudzwa.+ 5 Mumusoro make makanga muine ngowani yemhangura, uye akanga akapfeka nguo yokuzvidzivirira nayo ine simbi, yaiva nemakwande aipindana-pindana, uye nguo yacho yokuzvidzivirira+ nayo ine simbi yairema mashekeri zviuru zvishanu zvemhangura. 6 Pamipimbiri yake paiva nezvinodzivirira zvemhangura uye pfumo duku+ remhangura raiva pakati pemapfudzi ake. 7 Mubato womuti wepfumo rake wakanga wakaita sedanda revaruki,+ chipasa chepfumo rake chairema mashekeri mazana matanhatu esimbi; uye mutakuri wenhoo huru akanga achifamba ari pamberi pake. 8 Akabva amira, akatanga kushevedzera kumauto akarongwa evaIsraeri+ akati kwaari: “Nei muchibuda kuzogadzirira kurwa? Ini handisi muFiristiya uye imi hamusi vashandi+ vaSauro here? Sarudzai murume, uye ngaauye kwandiri. 9 Kana achikwanisa kurwa neni uye akandiuraya, tichabva tava vashandi venyu. Asi kana ini ndikamukunda uye ndikamuuraya, imi muchavawo vashandi vedu, uye muchatishandira.”+ 10 MuFiristiya wacho akati: “Ini ndinoshora+ mauto akarongwa aIsraeri nhasi. Ndipei murume, tirwisane!”+ 11 Sauro+ nevaIsraeri vose pavakanzwa mashoko aya omuFiristiya, vakabva vavhunduka vakatya kwazvo.+ 12 Zvino Dhavhidhi akanga ari mwanakomana womuEfrata+ uyu wokuBhetrehema raJudha ainzi Jese. Iye aiva nevanakomana vasere.+ Mumazuva aSauro murume wacho akanga atokwegura pakati pevarume. 13 Vanakomana vakuru vatatu vaJese vakaenda. Vakatevera Sauro kuhondo,+ uye vanakomana vake vatatu vakaenda kuhondo vainzi Eriyabhi+ dangwe, nomwanakomana wake wechipiri Abhinadhabhi+ nowechitatu Shamaa.+ 14 Dhavhidhi ndiye akanga ari gotwe,+ uye vakuru vacho vatatu vakatevera Sauro. 15 Dhavhidhi aienda kwaSauro uye aidzokera kuBhetrehema kunofudza makwai+ ababa vake. 16 MuFiristiya wacho airamba achiuya mberi mangwanani-ngwanani nemanheru uye achimira munzvimbo yake kwemazuva makumi mana. 17 Jese akabva ati kumwanakomana wake Dhavhidhi: “Ndapota, endesera vakoma vako efa iyi yezviyo zvakakangwa+ nezvingwa gumi izvi, uye kurumidza kuzvitakura, uende nazvo kumusasa kuvakoma vako. 18 Enda nemigove iyi gumi yomukaka kumukuru wechiuru;+ unoonawo kuti vakoma vako vakadini, uuye nechinhu chinobva kwavari chinoratidza kuti vakachengeteka.”+ 19 Munguva iyi, Sauro naivo, nevamwe varume vose vaIsraeri vakanga vari mubani reEraa,+ vachirwa nevaFiristiya.+ 20 Naizvozvo Dhavhidhi akafumomuka, akasiya makwai achitarisirwa nomuchengeti, akasimudza zvinhu zvacho, akaenda sezvaakanga arayirwa naJese.+ Paakasvika pane zvakanga zvakapoteredza musasa,+ mauto ehondo akanga achienda kunzvimbo yokurwira,+ uye akashevedzera nokuda kwokurwa. 21 VaIsraeri nevaFiristiya vakatanga kugadzirira kuti uto rakarongwa risangane nerimwe uto rakarongwa. 22 Dhavhidhi akabva angosiya mukwende+ wake uchitarisirwa nomuchengeti wemikwende+ akamhanyira kunzvimbo yokurwira. Paakasvika, akatanga kubvunza kuti vakoma vake vakadini.+ 23 Paakanga achiri kutaura navo, vakaona mhare iya yainzi Goriyati,+ muFiristiya wokuGati,+ ichibva kumauto akarongwa evaFiristiya, ikatanga kutaura mashoko akafanana neepakutanga,+ uye Dhavhidhi akateerera. 24 Asi varume vose vaIsraeri, pavakaona murume wacho, vakamutiza uye vakatya kwazvo.+ 25 Varume vaIsraeri vakatanga kuti: “Maona murume uyo ari kuuya here? Ari kuuya kuzoshora+ vaIsraeri. Zvino murume anomuuraya, mambo achamupfumisa nepfuma yakawanda, uye achamupa mwanasikana wake,+ uye achasunungura imba yababa vake pakati paIsraeri.”+ 26 Zvino Dhavhidhi akati kuvarume vakanga vamire pedyo naye: “Murume anouraya muFiristiya+ ari uko obvisa kuzvidzwa pavaIsraeri+ achaitirwei? Nokuti muFiristiya uyu asina kudzingiswa+ ndianiko kuti ashore+ mauto akarongwa aMwari mupenyu?”+ 27 Vanhu vacho vakabva vamuudza mashoko akafanana neepakutanga, vachiti: “Murume anomuuraya achaitirwa seizvi.” 28 Mukoma wake mukuru Eriyabhi+ akanzwa paaitaura nevarume vacho, Eriyabhi akatsamwira Dhavhidhi kwazvo,+ zvokuti akati: “Wavingei kuno? Wasiya makwai aya mashomanana ainaani murenje?+ Ini ndinonyatsoziva kuzvikudza kwako nokuipa kwomwoyo wako,+ nokuti wauya kuti uone hondo.”+ 29 Dhavhidhi akati: “Zvino ndaita sei? Handina kungobvunzawo hangu here?”+ 30 Naizvozvo akatendeuka achibva pedyo naye, akatarira kune mumwe munhu, akataura mashoko akafanana neepakutanga,+ uyewo, vanhu vakamupindura zvakafanana nezvepakutanga.+ 31 Naizvozvo mashoko akataurwa naDhavhidhi akanzwiwa, vakaaudza Sauro. Nokudaro iye akamutora. 32 Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Musarega chero munhu upi zvake achipera mwoyo.+ Mushandi wenyu achaenda uye acharwa nomuFiristiya uyu.”+ 33 Asi Sauro akati kuna Dhavhidhi: “Haukwanisi kuenda kunorwa nomuFiristiya uyu,+ nokuti unongova hako mukomana,+ asi iye munhu wehondo kubvira achiri mukomana.” 34 Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Mushandi wenyu akava mufudzi wemakwai ababa vake, pakauya shumba,+ uyewo bheya, uye chimwe nechimwe chakatakura gwai kubva paboka. 35 Asi ndakabuda, ndikachitevera, ndikachiuraya,+ ndikarinunura pamuromo wacho. Pachakatanga kundirwisa, ndakabata ndebvu dzacho, ndikachiwisira pasi, ndikachiuraya. 36 Mushandi wenyu akauraya shumba nebheya zviri zviviri; uye uyu muFiristiya asina kudzingiswa+ achava sechimwe chazvo, nokuti ashora+ mauto akarongwa+ aMwari mupenyu.”+ 37 Dhavhidhi akabva awedzera kuti: “Jehovha, akandinunura patsoka dzeshumba nepatsoka dzebheya, ndiye achandinunura paruoko rwomuFiristiya uyu.”+ Sauro akati kuna Dhavhidhi: “Enda, uye Jehovha ngaave newe.”+ 38 Zvino Sauro akapfekedza Dhavhidhi nguo dzake, akaisa ngowani yemhangura mumusoro make, achibva amupfekedza nguo yokuzvidzivirira nayo ine simbi. 39 Dhavhidhi akabva asungirira bakatwa rake pamusoro penguo dzake akaedza kuenda asi akatadza, nokuti akanga asina kudzijaira. Dhavhidhi akazoti kuna Sauro: “Handikwanisi kuenda ndakapfeka zvinhu izvi, nokuti handina kuzvijaira.” Naizvozvo Dhavhidhi akazvibvisa.+ 40 Akatora tsvimbo yake, akaiisa muruoko rwake, akasarudza hurungudo shanu mumupata une rukova, akadziisa muhomwe yake yomufudzi yakanga iri nhava yake, uye chipfuramabwe+ chake chaiva muruoko rwake. Akatanga kuswedera kumuFiristiya wacho. 41 Zvino muFiristiya wacho akatanga kuuya, achiramba achiswedera pedyo naDhavhidhi, uye murume akanga akatakura nhoo huru akanga ari mberi kwake. 42 Zvino muFiristiya wacho paakatarira, akaona Dhavhidhi, akatanga kumuzvidza+ nokuti aingova hake mukomana+ mutsvuku,+ ane chitarisiko chakanaka.+ 43 Naizvozvo muFiristiya wacho akati kuna Dhavhidhi: “Ndiri imbwa+ here, zvauri kuuya kwandiri netsvimbo?” Naizvozvo muFiristiya wacho akatuka Dhavhidhi nezita ravanamwari vake.+ 44 MuFiristiya wacho akati kuna Dhavhidhi: “Ingouya kwandiri, uye ndichapa shiri dzokudenga nemhuka dzomusango nyama yako.”+ 45 Dhavhidhi akatiwo kumuFiristiya wacho: “Uri kuuya kwandiri nebakatwa nepfumo uye nepfumo duku,+ asi ini ndiri kuuya kwauri ndichishandisa zita raJehovha wemauto,+ Mwari wemauto akarongwa evaIsraeri, wawashora.+ 46 Nhasi Jehovha achakuisa muruoko rwangu,+ ndichakuwisira pasi ndobvisa musoro wako pauri; uye nhasi ndichapa shiri dzokudenga nemhuka dzomusango+ zvitunha zveboka revaFiristiya; uye vanhu vepanyika pose vachaziva kuti kuna Mwari wevaIsraeri.+ 47 Ungano yose iyi ichaziva kuti Jehovha haaponesi nebakatwa kana kuti nepfumo,+ nokuti kurwa ndokwaJehovha,+ uye achakuisai mumaoko edu.”+ 48 Zvino muFiristiya wacho akasimuka, akaramba achiuya, achiswedera pedyo kuti asangane naDhavhidhi, Dhavhidhi akakurumidza kumhanyira kunzvimbo yokurwira kuti asangane nomuFiristiya wacho.+ 49 Dhavhidhi akabva apinza ruoko rwake muhomwe yake, akatora dombo imomo, akaripotsera, zvokuti akarova+ muFiristiya pahuma yake uye dombo racho rakanyura muhuma yake, akawira pasi nechiso chake.+ 50 Naizvozvo Dhavhidhi, nechipfuramabwe nedombo, akava nesimba kupfuura muFiristiya uye akawisira muFiristiya wacho pasi, akamuuraya; asi muruoko rwaDhavhidhi makanga musina bakatwa.+ 51 Dhavhidhi akaramba achimhanya, akanomira pedyo nomuFiristiya wacho. Akabva atora bakatwa rake,+ akarivhomora mumuhara waro, akamuuraya, paakagura musoro wake naro.+ VaFiristiya vakaona kuti ane simba wavo akanga afa, vakatanga kutiza.+ 52 Zvino varume vaIsraeri nevarume vaJudha vakasimuka, vakatanga kushevedzera, vakatevera+ vaFiristiya kusvikira kumupata+ chaiko, kusvikira kumagedhi eEkroni,+ uye vaFiristiya vakanga vakuvadzwa zvokufa vakaramba vachiwa munzira yaibva kuShaaraimu,+ kusvikira kuGati uye kusvikira kuEkroni. 53 Vanakomana vaIsraeri vakazodzoka vachibva kunodzingirira vaFiristiya, vakapamba+ misasa yavo. 54 Dhavhidhi akabva atora musoro+ womuFiristiya wacho, akaenda nawo kuJerusarema, akaisa zvombo zvake mutende rake.+ 55 Zvino Sauro paakaona Dhavhidhi achibuda kuti asangane nomuFiristiya wacho, akati kuna Abhineri+ mukuru weuto: “Abhineri, mukomana uyu mwanakomana+ waani?”+ Abhineri akati: “Noupenyu hwomweya wenyu, haiwa mambo, handimbozivi!” 56 Naizvozvo mambo akati: “Ubvunze kuti mukomana uyu mwanakomana waani.” 57 Naizvozvo, Dhavhidhi paakangodzoka kubva kunouraya muFiristiya, Abhineri akabva amutora, akamuendesa pamberi paSauro aine musoro+ womuFiristiya wacho muruoko rwake. 58 Zvino Sauro akati kwaari: “Mukomana, uri mwanakomana waani?” Dhavhidhi achibva ati: “Ndiri mwanakomana womushandi wenyu Jese+ muBhetrehema.”+